यी हुन महंगा स्कुल, भर्ना शुल्क रू. ७ लाख, मासिक शुल्क २ लाख - Chandragiri News
Home शिक्षा यी हुन महंगा स्कुल, भर्ना शुल्क रू. ७ लाख, मासिक शुल्क २...
यी हुन महंगा स्कुल, भर्ना शुल्क रू. ७ लाख, मासिक शुल्क २ लाख
२०७४, १५ बैशाख शुक्रबार २२:२६
काठमाण्डाै, वैशाख १५ ।
नयाँ वर्ष सँगै नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु भएको छ । शैक्षिक सत्रको सुरुवातसँगै अभिभावकहरु विद्यालय छनोट गर्ने र विद्यालय विद्यार्थीलाई विभिन्न आकर्षणका प्याकेज पस्किरहेका हुन्छन् । यस्तोमा कुन स्कुल कस्तो भन्ने थाहा पाउन गाह्रो हुन्छ ।
अभिभावकले राम्रा विद्यालय छनोट गर्ने चाहनामा आफ्नो बजेट पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ । सबै अभिभावकको एउटै आर्थिक हैसियत हुन्छ भन्ने हुँदैन । कतिपय अवस्थामा राम्रा भनिने स्कुलमा आर्थिक अवस्था कमजोर भएकै कारणले अभिभावक र विद्यार्थी निराश हुनु पर्ने अवस्था छ ।
यी हुन नेपालका केहि महंगा विद्यालयहरू जसमा विदेशी नियोगबाट सञ्चालित विद्यालयसँगै नेपाली लगानीकर्ताद्वारा सञ्चालित छन्
१) लिंकन स्कुल
लिंकन स्कुल सन् १९५४ मा स्थापना भएको हो । काउन्सिल अफ इन्टरनेशनल स्कुल्स एन्ड न्यू इंग्ल्यान्ड एसोसिएसन अफ स्कुल्सको सम्बन्धमा सञ्चालित यो विद्यालय अमेरिकन पाठ्यक्रममा आधारित छ । काठमाडौंको रवी भवनमा रहेको यस स्कुल मुलुककै सबैभन्दा महंगो विद्यालयमा पर्छ । स्कुल विषेश गरी विदेशी कुटनीतिक नियोग अधिकारीका बालबालिकालाई लक्षित गरिएको छ ।
विद्यालयमा कम्प्युटर, म्यूजिक, आर्ट तथा शारीरिक विकासका साथै फ्रेन्च, स्पेनिस भाषा पनि पढाइन्छ । यहाँको शुल्क अप्लाइन गर्नमा मात्रै प्रिस्कुलमा १ सय डलर, कक्षा १ देखि १२ सम्म ४ सय ५० डलर यदी नयाँ विद्यार्थी भएमा कक्षा १ देखि १२ सम्ममा ७ हजार डलर तोकिएको छ । साथै वार्षिक शुल्क कक्षा १ देखि १२ सम्म ९ सय डलर, यातायात खर्च १ हजार १ सय डलर, तथा सिनियर शुल्क १ सय २० डलर निर्धारण गरिएको छ । त्यस्तै मासिक शुल्क वार्षिक रुपमा प्रि–स्कुलको ६ हजार ४ सय डलर, इलिमेन्ट्रि स्कुलको १८ हजार १ सय २० डलर, निम्न माध्यमिक तहको १९ हजार ९ सय ९५ डलर साथै माध्यमिक तहको शुल्क २२ हजार २० डलर तोकिएको छ ।
२) द ब्रिटिस स्कुल
द ब्रिटिस स्कुल ललितपुरको सानेपामा अवस्थित छ । विद्यालय सञ्चालनको सम्पूर्ण स्रोत बालबालिकाको शुल्कमा आधारित छ । यहाँ बेलायती शिक्षापद्धतिको अध्यापन हुन्छ । यहाँ मुख्य गरी ब्रिटिस तथा कमनवहेल्थ नागरिक सन्तानलाई लक्षित गरिएको छ । स्कुलले नेपालमा काम गरिरहेका ब्रिटिस नागरिकका सन्तानलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ भने दोस्रो प्राथमिकतामा विद्यालयमा अध्ययनरत बालबालिकाका दाजुभाइ तथा दिदीबहिनी छन् । त्यस्तै, तेस्रो प्राथमिकतामा कमनवहेल्थ नागरिक जो नेपालमा काम गरिरहेका त्यसपछि मात्रै नेपाल विद्यार्थीहरुले शिक्षामन्त्रालयबाट नो अब्जेक्सन लेटर लिएमा मात्रै अध्ययन गर्न पाउँछन् ।
यहाँको शुल्क रजिष्ट्रेसनका लागि १ सय ५० पाउन्ड लाग्छ । त्यसतै, क्यापिटल डेम्लोप्मेन्टमा कक्षा २ सम्म ३ हजार पाउन्ड ३ र ४ मा ३ हजार ५ सय पाउन्ड, र जीसीई ए लेभल कक्षा ५ देखि १२ सम्म २ हजार पाउन्ड खर्च लाग्छ । त्यस्तै, रिफन्डेबल डिपोजिट रुवरुप कक्षा २ सम्म १ हजार ५ सय पाउन्ड, ३ र ४ र कक्षा ५ देखि १२ सम्ममा २ हजार १ सय ५० पाउन्ड खर्च लाग्छ । त्यस्तै, वार्षिक शुल्क भने नर्सरीमा १ हजार ८ सय पाउन्ड, कक्षा १ र २ मा ६ हजार १ सय २० पाउन्ड, कक्षा ३ र ४ मा ७ हजा ७ सय २० पाउन्ड, र कक्षा ५ भन्दा माथि कक्षा १२ सम्म ८ हजार ५ सय २० पाउन्ड खर्च लाग्छ ।
३) इन्टरशेनल फ्रेञ्ज स्कुल अफ काठमाडौं
फ्रान्सका नागरिक तथा नेपाली विद्यार्थी अध्यापन गराउने उद्देश्यले स्थापना गरिएको यो स्कुल महंगो स्कुलमा पर्छ । जसमा सुरुमा एप्लिकेशन शुल्क ४ हजार ७९० रुपैयाँ छ । त्यस्तै, डिपोजिटका रुपमा ५९ हजार ८८० रुपैयाँ बुझाउनु पर्छ । त्यसपछि यदि किन्टरगार्टेन स्कुलमा पढाउने हो भने पहिलो र दोस्रो दुबै वर्षको भर्नाका लागि लागि ५९ हजार ८८० रुपैयाँ तोकिएको छ भने इलिमेन्ट्री तहमा १ लाख १९ हजार ७६० रुपैयाँ छ । मासिक शुल्कमा किन्टरगार्टेन पहिलो वर्षमा ४ लाख ५५ हजार ९०, र दोस्रो वर्षको ट्युसन शुल्क ५ लाख ६२ हजार ८७५ रुपैयाँ तोकिएको छ । त्यस्तै, इलिमेन्ट्रि तहको कक्षाको ट्युसन शुल्क ६ लाख ९४ हजार ६१० रुपैयाँ तोएिको छ । गाडी भाडावापत रिङ रोडभित्रको ६ हजार ७५० र रिङरोड बाहिर ७ हजार ५०० छ भने खाजाका रुपमा प्रत्येक दिन ४४५ रुपैयाँ छ । यदि घरबाटै खाजा लैजाने हो भने ४५ रुपैयाँ मात्रै बुझाए पुग्छ । अतिरिक्त क्रियाकलाप अन्तर्गत प्रत्येक पटक २५ सयदेखि ४ हजारसम्म विभिन्न शीर्षकमा शुल्क निर्धारण गरिएको छ ।
४) काठमाडौं इन्टरनेशनल स्टडी सेन्टर
काठमाडौं इन्टरनेशनल स्टडी सेन्टर काठमाडौंको धोविघाटमा अवस्थित छ । स्कुलले विद्यार्थीलाई मिसन र नन–मिसन गरी दुई भागमा वर्गिकरण गरेको छ । यो क्रिश्चियन स्कुल हो । सन् १९८७ मा स्थापित यो स्कुल ह्युमन डेभ्लोम्पमेन्ट कम्प्युनिटी सर्भिसेस तथा नेपाल क्रिश्चियन एनजीओद्वारा सञ्चालित छ । सन् २००७ अगाडि यो युनाइडेट मिसन नेपाल र आईएनएफद्वारा सञ्चालित थियो । स्कुलले क्यापिटल लेभी अन्तर्गत मिसन र नन–मिसन दुबै विद्यार्थीलाई १ हजार ५ सय डलर लिन्छ । साथै डिपोजिट अन्तर्गत २५ हजार डलर खर्च लाग्छ भने मासिक खर्च अन्तर्गत वार्षिक रुपमा प्राथमिक तहमा मिसन विद्यार्थीलाई ४ हजार ६ सय २० र नन–मिसन विद्यार्थीहरुलाई ५ हजार ९ सय ४० र माध्यमिक तहमा मिसन विद्यार्थीलाई ६ हजार ३ सय ४० र नन–मिसन विद्यार्थीलाई ९ हजा २० डलर खर्च लिँदै आएको छ ।
५) युलेन्स स्कुल
नेपालमा नेपाली लगानीकर्ताद्वारा सञ्चालित यो सम्भवतः यो सबैभन्दा महंगो स्कुल हो । ललितपुरको खुमलटारमा रहेको यो स्कुलको पाठ्यक्रम र सिद्धान्त बैंक स्ट्रिटस डेभ्लोम्पेन्ट इन्टरयाक्टिभ अप्रोच एन्ड डेभ्लोपिङ क्यापेवल पर्सनमा आधारित छ । यहाँका कर्मचारीले अमेरिकाको न्यू योर्कमा रहेको बैंक स्ट्रिट स्कुल अफ एजुकेशनबाट तालिमप्राप्त छन् । भने बाँकी कर्मचारी विश्वका हरेक क्षेत्रबाट छन् । स्कुल नेपालमा पहिलो आईबी स्कुल हो । यो आधिकारिक रुपमा स्विजरल्यान्डस्थित इन्टरनेशनल ब्याक्कालउरेट अर्गनाजेसन आईबी डिप्लोमा कार्यक्रममा आधारित छ ।
यहाँ भर्नाका लागि कक्षा १ मा १ सयभन्दा बढीको सिट छ भने माथिल्लो तहमा वेटिङ लिस्टका आधारमा हुन्छ । कक्षा १ सय प्रत्येक शैक्षिक सत्रमा ६० वटा सिट हुन्छ भने अन्य तहमा सिट उपलब्ध भएमा मात्रै भर्ना गर्न पाइन्छ । यहाँ कक्षा १ सय १० सम्म ३ सय ६० विद्यार्थीको क्षमता छ । स्कुलले भर्ना शुल्कमा ३५ हजार, बार्षिक शुल्क ३५ हजार, सुरक्षा डिपोजिट ३५ हजार, मासिक शुल्क ३५ हजार ५०, वार्षिक शुल्क आपतकालित खाद्यन्नका लागि २ हजार ५ सय तथा करका रुपमा ३ सय ५० खर्च लाग्छ ।
६) मल्पी इन्टरनेशन स्कुल
पनौतीमा अवस्थित यो आवासिय विद्यालय हो । सन् १९९९ जुनमा स्थापना भएको यो विद्यालयमा विद्यार्थी र शिक्षकको अनुपात १ः१२ रहेको छ । विद्यार्थीको चौतर्फी विकासका लागि प्रोग्रेसिभ एन्ड लिबरल शिक्षण पद्धति अपनाइएको छ । विद्यालय मैत्री शिक्षा र वातावरणका भएको यस स्कुलमा कक्षा ४ देखि १० सम्म जम्मा २ सय ६५ विद्यार्थी अध्यापन गर्छन ।
स्कुलले कक्षा ४ मा १ सय विद्यार्थी लिन्छ भने सबै तहमा गरी जम्मा २ सय विद्यार्थी अध्ययन गर्छन् । अन्य कक्षाका लागि भने वेटिङ लिस्टका आधारमा भर्ना गरिन्छ । स्कुलले मासिक २५ हजारभन्दा बढी शुल्क लिन्छ ।
७) राजश्री गुरुकुल स्कुल
भक्तपुरको सल्लाघारीमा रहेको यो स्कुल २० रोपनी जग्गामा स्थापना भएको विद्यालय हो । नेपाली मौलिक शिक्षा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले स्थापित स्कुल हो । स्कुलले बालबालिकालाई स्थानीय रुपमा मात्रै नभइ अन्तराष्ट्रिय स्तरमा समेत पहिचान गराउने उद्देश्यले सोही किसिमको पाठ्यक्रम विकास गरेको छ । यो स्कुलमा एउटा शैक्षिक सत्रमा कक्षा १ मा ३० जनाले भर्ना गर्न पाउँछन । भने प्रत्येक शैक्षिक सत्रमा २६ सिट उपलब्ध छ भने प्रत्येक शैक्षिक सत्रमा भर्ना लिइन्छ । प्रत्येक कक्षाको क्षमता जम्मा २६ जना मात्रै हो भने कुल क्षमता कक्षा १ देखि ६ सम्म जम्मा १ सय ५६ हो । स्कुलले मासिक २५ हजारभन्दा बढी शुल्क लिन्छ ।
८) रातो बंगाला
रातो बंगाला स्कुल सन १९९२ मा नेपालमा स्थापना भएको हो । यो स्कुलका साथै शिक्षक तालिम संस्था पनि हो । विद्यार्थीलाई नविनत जानकारीसँगै अध्यापन गराइन्छ । यस स्कुलमा कक्षा १ मा ३ सय विद्यार्थीले आवेदन दिन पाउँछन् । त्यस्तै, कक्षा १ मा ६० जनाले एक पटक भर्ना गर्न पाउँछन भने ए लेभल तहमा समेत ६० जनाले ने भर्ना हुन पाउँछन् । कक्षा १ देखि १० सम्म ६ सय विद्यार्थी क्षमता हो । स्कुलमा भर्ना शुल्क प्राथमिक तहमा ७५ हजार, माध्यमिक तहमा ६० हजार तथा सुरक्षाका लागि प्राथमिक तहहमा २५ हजार खर्च लाग्छ । साथै मासिक खर्च अन्तर्गत कक्षा १ मा २२ हजार, र माध्यमिक तहमा खानाबाहेक १८ हजार रुपैयाँ खर्च लाग्छ ।
९) रुपिज इन्टरनेशनल स्कुल
यो अंग्रेजी माध्यमबाट अध्यापन हुने स्कुल हो । सन्् १९८२ मा स्थापित यो स्कुल अन्तराष्ट्रिय तथा स्वदेशी विद्यार्थीलाई लक्षित गर्दै स्थापना भएको विद्यालय हो । भारतीय बोर्ड सीबीएसई तथा कक्षा ए लेभल क्याम्ब्रिज विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त छ ।
विद्यालयमा नेपालीसँगै भारतीय, इटालियन तथा कन्टिनेन्टल खाना खुवाइन्छ । स्कुलमा प्रत्येक शैक्षिक सत्रमा कक्षाा १ मा २० सिट क्षमता छ । त्यस्तै, कक्षा १ देखि १० सम्ममा २ सय १० सिट क्षमता छ । यो स्कुलमा भर्ना शुल्क वापत कक्षा १ मा ७१ हजार ७ सय माध्यमिक तहमा ७५ हजार शुल्क लाग्छ । त्यस्तै, वार्षिक शुल्क स्वरुप कक्षा १ मा १५ हजार लाग्छ । त्यसतै मासिक शुल्कमा कक्षा १ मा एक पटकको खाना र यातायातसँगै २२ हजार रुपैयाँ, र माध्यमिक तहमा यातायात सहित १८ हजार रुपैयाँ खर्च लाग्छ ।
१०)प्रिमियर इन्टरनेशन स्कुल
प्रिमियर इन्टरनेशन स्कुल तलितपुरको सातदोबाटो अवस्थित छ । यो स्कुलले २०६५ सालदेखि कक्षा १ सुरुवात गरेको हो । स्कुलमा आईी कार्यक्रम अन्तर्गत अध्यापन हुन्छ । स्कुलमा मन्टेश्वरी शिक्षा पद्धति समेत अपनाइएको छ । भौतिक संरचनाले युक्त तथा उत्कृष्ट ल्याब तथा उच्चतम प्रविधिको प्रयोग गर्दै शिक्षण सिकाइमा प्रभावकारिता ल्याएको छ । स्कुलमा कक्षा १ मा १ सय १० जना विद्यार्थीले आवेदन गर्न पाउँछन् । त्यस्तै, एउटा शैक्षिक सत्रमा कक्षा १ मा एक पटक भर्नाका लागि प्रवेश परीक्षाका माध्यबाट जम्मा ६० जना लिइन्छ । भने अन्य कक्षाको हकमा सिट उपलब्ध भएमा मात्रै भर्ना लिइन्छ । कक्षा १ देखि ७ सम्म ३ सय ६० विद्यार्थी क्षमता छ । स्कुलले मासक शुल्क २४ हजार लिन्छ ।
११) चाँदबाग स्कुल
सन् १९९६ स्थापना भएको यो स्कुल चौधरी एजुकेशन फाउन्डेसनद्वारा सञ्चालित यस स्कुल काठमाडौंको बाँसबारीमा अवस्थित छ । ५० हजार स्वायर फिटमा अवस्थित स्कुल बाल–मैत्री वातावरणमा सञ्चालित छ । सुरुमा प्राइमरी स्कुल हुँदै माध्यमकित तहसम्म अध्यापन सुरु गरेको स्कुलमा कक्षा ८ देखि १० सम्म नेपाल एसएलसी बोर्ड अफ नेपाल र सीबीएसई भारतबाट मान्यता प्राप्त छ । यहाँ कक्षा १ मा शैक्षिक सत्रमा कक्षा १ मा ५१ जनाको सिट उपलब्ध छ । त्यस्तै, १ कक्षादेखि १० कक्षासम्म ५ सय ५० विद्यार्थीको क्षमता छ । स्कुलमा मासिक शुल्क वापत १० हजार रुपैयाँ लिन्छ ।
शुभतारा स्कुल सन् १९८९ मा स्थापना भएको हो । ललितपुरमा अवस्थित यो स्कुल कक्षा १ मा ४४ सिट क्षमता छ भने कक्षा १ मा करिब १ सय जना विद्यार्थीले आवेदन दिन्छन् । स्कुलले मासिक शुल्कवापत रु १२ हजार शुल्क लिन्छ । स्कुलमा २ हजार विद्यार्थी अध्ययनरत तथा ३ सय कर्मचारी कार्यरत छन् ।
१३) ज्ञानोदय इन्टरनेशनल रेसिडन्टल स्कुल
ज्ञानोदय इन्टरनेशनल स्कुल बुङमति, खोकनामा अवस्थित छ , सन् १९९९ मा स्थापना भएको यो स्कुल काठमाडौंदेखि १२ किमि दुरीमा पर्छ । विद्यालयको एक सय रोपनीमा फैलिएका साथै एसएलसीबोर्ड तथा शिक्षामन्त्रालयद्वारा मान्यता प्राप्त छ । यहाँ कक्षा १ मा १ सयले आवेदन दिन्छन भने जम्म २२ जनाको सिट क्षमता छ । साथै कक्षा १ देखि ९ सम्ममा ३ सय ५० विद्यार्थी क्षमता छ भने अहिले जम्मा २ सय ३३ विद्यार्थी अध्यापन गरिरहेका छन् । स्कुलले मासिक शुल्क बमोजिम २२ हजार रुपैयाँ खर्च लिन्छ ।
१४) मिल्स बेरी
लाजिम्पाटमा रहेको यो स्कुल पनि महंगो स्कुलमा पर्छ । कक्षा १ मा भर्ना गर्नका लागि कम्तीमा ५० हजार रुपैयाँ लाग्छ । स्कुलमा विभिन्न सेवा सुविधा उपलब्ध गराइएको छ । कक्षा १ मा वर्ष भरीमा विभिन्न शीर्षकमा २ लाख रुपैयाँ खर्च हुन्छ ।-
www.educationnewsnepal.com बाट ।
Previous articleहिमालय टाइगरको काठमाण्डाै महानगरपालिकाको मेयर पदमा दाबेदारी
Next articleयसरी हाल्नुहोस् भोट (भिडियो सहित)
‘पढ्दै कमाउँदै’ कार्यक्रमका लागि चन्द्रागिरिबाट कंकाली मावि छनोट
ऋचा शिक्षा सह सदनका प्रमुख खड्का शिक्षा मन्त्रीबाट सम्मानित
नेपाल इन्जिनियर्स एशोसिएसनको गण्डकि प्रदेश सदस्यमा ई. प्रकाश काफ्लेको उम्मेदवारी